५० शय्याको जाजरकोट अस्पताल : न औषधि पाइन्छ, न विशेषज्ञ डाक्टर भेटिन्छ – Nepali Health
५० शय्याको जाजरकोट अस्पताल : न औषधि पाइन्छ, न विशेषज्ञ डाक्टर भेटिन्छ
२०७४ चैत १७ गते ७:२९ मा प्रकाशित
जाजरकोट, १७ चैत । सरकारले जिल्ला अस्पतालहरूबाट ७० प्रकारका औषधि निःशुल्क वितरण गरे पनि जाजरकोट अस्पतालमा भने सामान्य औषधि पनि पाइँदैनन्। जिल्ला अस्पतालमा लामो समयदेखि औषधि अभाव भएको छ। यहाँ सिटामोल र जीवनजलसमेत पाइन छाडेको सेवाग्राहीको गुनासो छ।
जिल्ला अस्पताल कागजी रूपमा स्तरोन्नति गरिएपछि सरकारले निःशुल्क औषधि दिन बन्द गरेको छ। स्तरोन्नति भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि सेवामा कुनै परिवर्तन आउन नसकेको नागरिक अगुवा खिमबहादुर शाही बताउँछन्। उनले भने, ‘सुत्केरी गराउन र सामान्य घाउचोट भएका बिरामीको प्लास्टर गर्न समेत नसक्ने अस्पतालबाट अरू के आस गर्ने ? अस्पताल स्तरोन्नतिको नाममा औषधि आउन छाडेपछि स्थानीय निरास छन्।’
भेरी नगरपालिका १ का मधुकर नेपाली भन्छन्, ‘सामान्य रोगको पनि उपचार हुँदैन। यो अस्पतालले निःशुल्क पाइने औषधि पनि दिँदैन तर बिरामीलाई भने उपचारको साटो रेफर गर्छ।’
जिल्लाका अस्पतालका निमित्त प्रमुख मेडिकल अधिकृत डा. अमिन शाहले औषधि सकिँदा उपचार सेवा प्रभावित भएको बताए। ‘आन्तरिक स्रोतबाट खरिद गरिएका औषधिले हालसम्म जेनतेन चल्यो,’ उनले भने, ‘अब कसरी उपचार सेवा चलाउने समस्या भइसक्यो, बजेट अभावमा औषधि खरिद गर्न सकेका छैनौं, नगरपालिकाले बजेट नदिँदा थप समस्या भएको हो।’
५० शड्ढया नाम मात्रको छ। बेड २५ वटा राखिएको छ। तर, स्तरोन्नति गरिएअनुसार जनशक्ति पूर्वाधार र अन्य व्यवस्थापन शून्यजस्तै छ। औषधि, आवश्यक उपकरण, दक्ष चिकित्सक, पूर्वाधार, खानेपानी तथा सरसफाइ, व्यवस्थित प्रयोगशाला र ब्लड बैंकलगायत सबैको अभाव हुँदा अस्पताल आफैं बिरामी छ।
आजको अन्नपूर्णपोष्टमा खबर छ ।
मोवाइलको सहायतामा चिट चोर्ने क्रम बढेपछि चिकित्सकको लाइसेन्स परीक्षामा जामर प्रयोग